🎺 Egwu | Gaa na Hultsfred
A mụrụ ememme egwu egwu kachasị egwu na Sweden ebe a. Mana obodo egwu Hultsfred karịrị nke ahụ. Na mgbakwunye na ihe omume egwu na ememme, enwere ihe ngosi, Swedish Rock Archive na ebe egwu egwu. Chọrọ ịmeghachi Ememme Hultsfred? Na mkparịta ụka anyị mmekọrịta Hultsfred - Walk, ị nwere ike ịnwe mmetụta na ala nke Hawaii na-ama jijiji ọzọ. Nabata ụwa nke egwu!
"Egwu dị n'igwe" (Hultsfred anthem)
Anyị na-ahụ kpakpando na onye ọ bụla. Na Stefan na ụgbọ ala, na Hanna na n'ụlọ na-elekọta ọrụ na ọ dịghị ihe ọzọ na gị! Ntụgharị egwu egwu ndị otu ọchị Infallet na-egosi etu ọ dị egwu
Akụkọ Archive nke Sweden
Ihe karịrị ọkara nde ihe metụtara egwu a ma ama na Sweden. N'ebe a ị ga -ahụ ndekọ, akwụkwọ mmado, ndekọ vidiyo, akwụkwọ, ịmata ihe - yana uwe mbụ Kurt Olsson! Asụsụ Sweden